Home Wararka Xildhibaanada mooshinka gudbiyay oo soo saaray qodobo muhiim ah (Akhriso)
Xildhibaanada mooshinka gudbiyay oo soo saaray qodobo muhiim ah (Akhriso)
Kadib kulan ay Mudanayaashaan ku yeesheen magaalada caasimada ah ee Muqdisho, gaar ahaan howlka shirarka Guddiyadda joogtada ah ee Gollaha Shacabka waxay soo saareen labo qodob oo ku socda Madaxwayne Farmaajo.
Ugu horeyntii, sharcidejiyaasha waxay ku booriyeen inuu hoggaansamo dastuurka Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla, islamarkaana aanu marnaba dhinac marin.
Si lamid ah, Xilldhibaanadda Aqalka Hoose ee Baarlamaanka ayaa waxay soo jeediyeen inta cod loogu qaadayo mooshinka xilka-qaadista uusan “sameyn karin” Madaxwaynaha qodobada soo socda:
1) In wax heshiis ah uusan geli karin.
2) In uusan qofna magacaabi karin xilna ka qaadi karin.
3) In uusan dalka ka bixi karin inta dacwadaadu dhinac uga dhacayso.
Qodobadaan ay soo saareen xubnahaan ayaa kusoo aadaya xili shalay oo Isniin ahayd Gudoomiye ku xigeenada ay soo saareen warqad, taasi oo inta badan umuuqata mid lagu go’doominayo Gudoomiye Mursal.
Sida ku cad warqada, Xilldhibaanadda Mooshinka gudbiyay waxaa la faray inaanu ku shiri karin goobaha uu leeyahay Aqalka Wakiilada rayidka, balse waxaa muuqata inay buriyeen maanta oo ay kulan ku qabsadeen.
Tan iyo markii uu soo if-baxay Mooshinka xilka qaadista Farmaajo, oo keenay xiisad siyaasadeed oo qarka u saaran inay xargaha goosato labada dhinac – mucaarad iyo muxaafad – ayaa soo saarayay qoraal iska soo horjeeda.
Previous articleMadaxtooyada oo Albaabada Loo xiray: Wasiir Ducaale oo laga celiyey Albaabka Hore.
Next articleGabar duubeysay muuqaal barakacayaal lacag loo qeybinaayo oo la toogtay (Vidoe – Daawo)
Waa maxay ujeedada khilaafka been abuurka ee Cabdi Xaashi & Mahdi...